गाडी कम्पनीको वर्कशपमा सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा, कसको के सुविधा ? | Automotive News Nepal
गाडी कम्पनीको वर्कशपमा सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा, कसको के सुविधा ? ३० असार, २०७७
केहि बर्ष अघिसम्म अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको प्रमुख प्राथमिकता सेल्स अर्थात बिक्रीमा मात्र हुने गर्दथ्यो । उनीहरुको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ बढी भन्दा बढी गाडी बिक्री गर्ने र टार्गेट पुरा गर्ने हुन्थ्यो ।
कम्पनीहरुले सेल्स डिपार्टमेन्टमा रहेका कर्मचारीहरुलाई पनि आकर्षक ड्रेसअपका साथ कस्टमर तान्न प्रेरित गर्थे । सेल्सका कर्मचारीको भनाइकै आधारमा गाडी छनोट गर्नेहरु पनि धेरै थिए । तर, अहिले कम्पनीहरुले पनि आफ्नो पोलिसीमा धेरै परिवर्तन गरिसकेका छन् ।
सर्भिस सेन्टर र गुणस्तरिय सेवा बिना गाडी बिक्री सम्भव छैन । ग्राहकहरु निक्कै सचेत भएर गाडी खरिद गर्नु भन्दा पहिला नै अफ्टर सेल्स सर्भिसको बारेमा सम्पुर्ण जानकारी लिन थाल्छन् । यसले गर्दा सर्भिस सेन्टरहरुले आफूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कुनै पनि नयाँ मोडल ल्याउनु भन्दा पहिला प्राबिधिकहरुलाई पनि अपग्रेड गर्दै आवश्यक पार्ट्स नल्याइकन व्यवसाय गर्न सम्भव नभएको व्यवसायी बताउँछन । सर्भिस उपलब्ध गराउने विषयमा हरेक कम्पनीको आफ्नै पोलिसी बनाउन थालेका छन् ।
टोयोटा गाडीको सर्भिस दिने यनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले नेपालमा नै पहिलो पल्ट विभिन्न प्रकारका अत्याधुनिक सर्भिस इक्विपमेन्ट ल्याएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले नेपालमै पहिलोपटक थ्रीडी ह्विल अलाइन्मेनटबाट सर्भिस दिन प्रारम्भ गरेको दाबी गरेको छ । यो प्रविधिले टायरमा देखिने विभिन्न समस्या तुरुन्तै पत्ता लगाएर समाधान गर्न सजिलो बनाउछ ।
त्यस्तै दुइवटा पेन्ट बुथ, हिटिङ च्याम्बरद्वारा डेन्टपेन्टको काम भइरहेको छ । नेपालमा पहिलो पल्ट नै स्प्यानिस क्र्यास रिपेरियर सिस्टम मेसिन प्रयोग गरेर दुर्घटनामा परेका गाडीहरुको मर्मत गर्ने गरेको छ । अन्डर च्यासिस वासिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर गाडी सफा गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा १० मिनेटको अवधिमा नै गाडी सफा गर्न सहज हुन्छ । काठमाडौको रिङरोड भित्र २४ घण्टे प्राविधिक सेवा र अन्य स्थानमा भने फोन मार्फत प्राविधिक सल्लाह लिन सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
त्यस्तै महिन्द्रा ग्रुप अन्तर्गतको बालाजु अटो वर्क्सले ग्राहकलाई सुविधा दिन महिन्द्रा क्लब नै गठन गरेको छ । क्लबको सदस्य बने ग्राहकले बर्षभरीमा चारवटा फ्रि चेकअप, स्पेयर पार्ट्समा १५ प्रतिशत छुट, पिकअप एन्ड ड्रपलगायतका धेरै सुविधाहरु प्राप्त गर्छन् । उपत्यका बाहिर पनि कम्पनीले तराई भेगमा हरेक ५० किलोमिटरको दुरीमा र पहाडी क्षेत्रमा हरेक साढे २ घण्टाको फरकमा सर्भिस सेन्टर राख्ने योजना बनाएको छ ।
टाटाको गाडी सर्भिसिङ गर्ने सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले २४ बाई सेभेन मोबाइल भ्यान सेवा सञ्चालन गरेको छ । ग्राहकलाई समस्या परेमा ७ दिन २४ सै घण्टा यो सेवा उपलब्ध हुन्छ । काठमाडौमा जानकारी पाएको १ घण्टा भित्र र उपत्यका बाहिर ९० मिनेट भित्रमा सर्भिस दिने फास्ट ट्रयाक सर्भिसमार्फत सेवा दिंदै आइरहेको छ ।
निशान र ड्याटसनले पनि २४ घण्टे सर्भिस स्टाफ उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म एक्सप्रेस सर्भिस नभएकोले रिकभरी भ्यान राखेर अन द स्पट सेवा उपलब्ध गराउने सोचाई ड्याटसनले राखेको छ ।
फोर्डले भने ग्राहकसँग पारिवारिक सम्बन्ध कायम राख्न खाजा, नास्ताको व्यवस्था गरेको छ । अहिले काठमाडौमा मात्र रहेको यो सुबिधा उपत्यका बाहिर पनि बढाउने तयारी छ । सर्भिस सेन्टरमा नियमित आउने ग्राहकलाई वारेन्टी अवधि सकिएप्छि पनि केही छुट दिने गरेको छ । ग्राहकको आवश्यकता अनुसार पिक एन्ड ड्रपको सुविधा पनि नेपालभर उपलब्ध छ । बिशेष गरि उपत्यका भित्र २४ घण्टा ७ दिन कम्पनीले यस्तो सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाली बजारमा सर्बाधिक बिक्री हुने हुन्डाई र मारुती सुजुकीले पनि ग्राहक सेवालाई मध्यनजर गर्दै सर्भिस सेन्टर विस्तार गरिरहेका छन् । उपत्यकामा हुन्डाई र मारुती सुजुकीको आधा दर्जन बढी सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । जहाँ अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरण, दक्ष तथा अनुभवी टेक्निसियन र उत्कृष्ट कस्टमर केयर सर्भिस उपलव्ध गराइएको छ । गाडी बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका यी दुई कम्पनी बीच कसले राम्रो सर्भिसिङ दिने भन्नेमा समेत प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
२५ वर्ष पुग्यो बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, व्यवस्थित बन्दै अटो भिलेज
बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन स्थापना भएको २५ वर्ष पुग्यो । कोरोना भाइरसको महाम...
लोहनी भन्छन् : चितवनमा अटो भिलेज स्थापनाका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको छ
चितवन अटो मेकानिकल व्यवसायी संघमा ३ सय ५० जना अटो मेकानिकल व्यवसायी आवद्ध छन् ।...
लामो समय कार नचलाउदा हुने १० झन्झट, जुन आफै समाधान गर्न सकिन्छ
लामो समयदेखि कार नचलाई राख्नु भएको छ भने कारमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।...